အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: September 2010
i think she saysalot of "you know"
she seems like i don't know,
like she has to read it by heart and say it in the public "u know"
3:18 PM MS: :)
MS: That's why I don't even read Little Daughter
me: that's how i feel like too
me: that's why i mean
may be they don't have enough survival skills
and i don't think they can do this even in England for the rest of their life
3:31 PM u can't talk to ruree like this hehe
me: u don't want to what?
I don't want to read anything
They don't breath CO2 and drink urines
i think that's why communism does not work and failed
Posted by တီချမ်း at 5:01 PM4comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 4:58 PM 1 comment: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 4:57 PM No comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 2:36 AM 12 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 3:39 AM 1 comment: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 10:28 PM 1 comment: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 12:38 AM2comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 5:59 AM2comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 9:10 AM 1 comment: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 3:00 PM5comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 4:55 PM3comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 1:01 AM5comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 1:05 AM 12 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 5:46 AM9comments: Links to this post
ယောက်ျားတယောက်ကို မလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်၊ ကိုယ့်ကို ခွာစေချင်ရင်၊ သူ့ကိုမချစ်တော့ရင် နည်းနည်းလေးမှ မခက်ပါဘူး အောက်ဖော်ပြပါ စကားတွေထဲက တခွန်းခွန်း ကိုသာပြောပ လိုက်ပါ။ ကိုယ့်နားကနေ အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ ပန်းကန်လုံးစီးပြီးလစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက် မြန်မြန်လစ်စေချင်သလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲ စကားတွဲတွေကိုရောနှောတွဲစပ် အသုံး ပြုနိုင်ပါသေးတယ်နော်။ ဥပမာ…
“ကျမ အရင်တုံးက ရည်းစားက ရှင့်ထက်အဆ ၁ ထောင် ၁ သောင်းမက သာတယ်”
“ကျမ ရှင့်ကို နည်းနည်းလေးမှ လေးစား အထင်ကြီး လို့မရဘူး”
“---ရဲ့ ရည်းစား ကိုကြည့်စမ်း ပိုက်ဆံအရှာ ဘယ်လောက်တော်သလဲ ရှင်နဲ့များတခြားစီ သူများ ချီး နည်းနည်း သွားရှုလိုက်အုံး”
“ရှင့်နဲ့အတူနေရတာ ကျမအတွက် တကယ့်ကို လောက ငရဲကျနေတာပါပဲ”
“ရှင့်အမေ က လဲ သိပ်မုန်းဖို့ကောင်းတာ”
“ရှင့်ညီမ ဆိုတာကလဲ သိပ်ရုပ်ဆိုးလွန်းလို့ ယူမယ့် လူမရှိတာနေမှာ”
“လစာ ကို တလတလ ကျမ မအပ်လို့ ဘယ်မယားငယ် ကိုပေးချင်နေသေးတာလဲ”
“နောက်ကို ရှင့်သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ ဟာတွေ အကုန်လုံး ကျမ အိမ်အရိပ် ကိုမနင်းစေနဲ့ ကျမ သူငယ်ချင်းဆိုတာ ရှင့်အတွက်လဲ သူငယ်ချင်းပဲ လို့ မှတ်ထား”
“အလုပ်ပြီးတာနဲ့ အိမ်ကို တန်းပြန်ဖို့စဉ်းစားပါ ဘယ်မှ အလေနတော လိုက်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့”
“ရှင့်အရင် ရည်းစားက ရှင့်ကို ဘာကြည့်ကြိုက်တာလဲဟင် ကျမတော့ စဉ်းစားလို့မရဘူး”
“နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း ကျမ ကို “အရမ်းချစ်တယ်” လို့ ပုံမှန်ပြောရမယ်”
မင်းရည်းစားက “ကိုယ့်ရဲ့ အိုင်ဒီယာကတော့….” လို့ ပြောတဲ့ အချိန်မှာ သူ့စကား ကိုဖြတ် ပြီးတော့ …..“ဟာ့ ဟာ့ ဟ…တိတ်စမ်း ဘာအိုင်ဒီယာလဲ အိုင်ဒီယာ ဆိုတဲ့ စကားလုံး ကိုကော ရှင် က စာလုံးပေါင်းတောင်မှ မှန်အေင် ပေါင်းတတ်လို့လား?” လို့ ပြောပစ်လိုက်ပါ။
မင်းရည်းစား က သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကမ္ဘာ့ရေးရာတွေ ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ဘေးနား သွားထိုင်ပြီးတော့ ရယ်ဟဟ နဲ့ “အော် ရှင်က ကမ္ဘာ့ရေးရာ ဆိုတာ ကိုလဲနားလည်သေး သကိုး…ဆန်အိုးထဲမှာ ဆန်မရှိရင်ကော ဘာရေးရာလဲ ပြောစမ်းပါအုံး” လို့ ခနဲ့တဲ့တဲ့ မေးပါ။
တီပြောတာယုံပါ အထက်ပါ စကားတွေထဲက တခွန်းခွန်း ကိုသာ မျက်နှာစေ့စေ့ ကြည့်ပြီး ပြော ထည့်ပလိုက် အဲ့ဒီ မင်းမမြင်ချင်တော့တဲ့ ယောက်ျား ချက်ချင်း မင်းရှေ့က ပျောက်သွားစေ ရမယ်။
တီချမ်းက ဂျန်ဒါ စန်းစတစ် (Gender sensitive) ဖြစ်တယ်လေ အဲ့တော့ ယောက်ျား ကိုပဲ တဘက်သတ် မရေးပါဘူးနော်။ မိန်းမတွေကိုလဲရေးရမှာပေါ့….ဟုတ်တယ်မှလား…?
မိန်းမတယောက်ကို ကိုယ့်အနားကနေ အမြန်ခွာထုတ်ပစ်ချင်ရင်လဲ နည်းနည်းမှ မခက်ပါဘူး။ အောက်ဖော်ပြပါ စကားတွေထဲက တခွန်းခွန်းကို သာပြောပလိုက်ပါ။ ဟယ်ရီပေါ်တာ ရဲ့ မှော် ကြိမ်လုံးတောင် မလိုဘူး အပ်ချလောင်းဆိုတာနဲ့ အလင်းအလျင်နဲ့ “ဟုတ်” ခနဲ ပျောက်သွား စေရမယ်။
“မင်း အသက်ကြီးလာရင် တော်တော်ကြည့်ရဆိုးမှာဘဲ”
“မင်းရဲ့ ခါးက ၂၉ လက်မ ဆိုတာ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား”
“မင်းရဲ့ ဖင်က ငါ့အိမ်က ရေဇလုံထက်တောင် ပိုကြီးသေး”
“မင်း အင်္ကျီ ဝတ်ထားတာ မဝတ်ထားတာ ထက်ပိုကြည့်ကောင်းတယ်”
“မင်း အလှနည်းနည်းပြင်မှ ပိုကောင်းမယ် မိတ်ကပ်မလိမ်းထားရင် မင်းမျက်နှာက လူမြင်လို့ တောင်မကောင်းဘူး”
“မင်းရဲ့ အိုင်ကျူက ၇၀ တောင်ရှိပါ့မလားဟင်”
“မင်း တမျက်နှာလုံး ကိုဖြစ်နိုင်ရင် ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီ လုပ်ပြီး ပြင်ပလိုက်သင့်တယ်”
“မင်း အမေက မွဲလိုက်တာ တေနေတာပဲ”
“မင်း အဖေက ဘာမှ အဖြစ်မရှိဘူး သတ္တိကြောင်တဲ့နေရာမှာ ကြွက်ကတောင် အဘ ခေါ်ရ မယ်”
“ငါ့မှာ လိင်စိတ်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက် စိတ်ဖောက်ပြန်မှု ရှိတယ်လို့ ငါ့ရဲ့ ဆိုက်ခီယာထရစ် က ပြောတယ်”
“မင်းတယောက်ထဲကိုပဲ ချစ်ဖို့ဆိုတာ ငါ့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်”
“မင်းကိုချစ်တာ ထက် ငါ့ကိုငါ ပိုချစ်တယ် သိလား”
“ငါ ရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ကို လွယ်လွယ် သုံးပစ်မယ် မစဉ်းစားနဲ့”
“ချိန်းတွေ့တိုင်း ကုန်ကျစရိတ်ကို တူတူခံကြမယ်”
“အခုထက် မင်း ပိုရုပ်ဆိုးလာအုံးမယ်ဆိုရင် မင်းကို ငါမပေါင်းနိုင်တော့ဘူး”
တွေ့တယ်မှလား မိန်းမတယောက်ကို မလိုချင်တော့ရင် “မင်းကို ငါမချစ်ပါဘူး၊ မချစ်တော့ဘူး” လို့ပြောတာထက် ပိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ စကားတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ခုနက ပြောထား တဲ့ စကားတွေ တခုခု သာပြောကြည့် မပြတ်ရင် ကြိုက်သလိုပြော။
ကဲ ပြီးပြီ။ ပြောချင်တာတွေလဲ ပြောပြီးပြီနော်။ ကြော်ငြာဝင်မယ်။
Freelance လင်ကွဲမယားကွဲ အကြံပေး
Posted by တီချမ်း at 4:19 AM 11 comments: Links to this post
လက်စသတ်တော့ ယောက်ျားတွေမှာလဲ “ရင်သားပြဿနာ” ရှိနေတာပါလား။
ပေါက်ပေါက်ရှာရှာနော် ယောက်ျားတွေရဲ့ ရင်သားတဲ့။ ဒီလိုပါပဲ တီချမ်းရေးတဲ့ စာတွေကို တချို့ကတော့ လွတ်လပ်လွန်းတယ် လို့ထင်ကြတယ်။ တချို့ကကျတော့လဲ မသင့်တော်တာ တွေရေးလွန်းတဲ့ဟာကြီးပေါ့လေ။ တချို့ကျတော့လဲ တီက အမှန်တွေ သိပ်ရေးတာပဲတဲ့။ တခါတခါကျတော့ ကိုယ်လဲ တွေးမိပါတယ်။ ကိုယ်မှဒီလိုတွေမရေးရင် ဘယ်သူက ရေးမလဲ နော်။ ကိုယ့်စာတွေမှာ လဲ ယူသော်ရ၏ ဆိုတာလိုပေါ့။ ကိုယ့်စာတွေ ဘတ်တဲ့ မိန်းမတွေ ကတော့ ယောက်ျားတွေအကြောင်း သူတို့မသိရသေးတာတွေ သိရတော့ အကျိုးရှိမယ်ထင် ပါတယ်။ ယောက်ျားတွေကတော့ သူတို့နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ခံစားရမှာပေါ့။ထားပါတော့။ ပိုစ့်ပြန်ဆက်မယ်။
မိန်းမတွေက (အများစုက) ရင်သား သေးလွန်းရင် မလှဘူး၊ ကိုယ့်ကို ကိုယ် ယုံကြည်မှု မရှိဘူး၊ ကိုယ်တို့ စိတ်ထဲမှာ ခံစားရတာကို ပြောတာပါ (ကိုယ်တို့ ဖွင့်ပြောသည်ဖြစ်စေ မပြောသည် ဖြစ်စေပေါ့) အဲ့လိုပဲ ကြီးလွန်းရင်လဲ မကောင်းဘူး ထင်တတ်ကြပြန်ပါတယ်။ ကဲ ဘယ်လိုပြော မလဲ လူ့အလို နတ်မလိုက်နိုင် မိန်းမအလို ဘုရားတောင် မလိုက်နိုင်ဘူး။ ကဲပါ ကိုယ်က မိန်းမတွေအကြောင်းပဲ ပြောနေတာ ဒီပိုစ့် က တကယ်တော့ ယောက်ျားတွေ ရဲ့ ရင်သား အကြောင်းပြောမလို့ မဟုတ်လား။
ခုနက ပြောခဲ့သလိုပဲ မိန်းမတွေက ရင်သားပြဿနာကို ကိစ္စကြီး တရပ် လိုဖြေရှင်းနေရချိန်မှာ ယောက်ျားတွေမှာလဲ အဲ့ဒီ ပြဿနာ က ရှိနေပါတယ်။ တလောကမှ အက်စီဒန်တယ်လီး ခင်ခဲ့တဲ့ (မှတ်ချက်။ ကိုယ်က စလစ်ဘရစ်တီတွေနဲ့ ဟန်းအောက် မလုပ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ဒီလို အက်စီဒန်းတယ်လီး ခင်သွားတော့လဲ စာဘတ်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိမယ့် သုတေသနလေး လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့) ဒီနိုင်ငံက ၄၂ လက်မတိတိ “လူတွေအားကျ”တဲ့ ကြွက်သားပြည့် ရင်သား ရှိတဲ့ နာမည်ကြီး အဝတ်အစားမော်ဒယ်တဦးက ပြောပါတယ် “ရင်သားကြီးတာဟာ ကျတော့ အတွက်တော့ စိတ်ရှုပ်စရာ၊ သိမ်ငယ်စရာ၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ ကိစ္စတခုပါ။ ရင်သား ကို ကျစ်လစ်သွားစေမယ့် အားကစားတခုခု ရှာလုပ်ချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ရင်သားကြီး တာကြောင့် ပဲ ကျတော့မှာ အမြဲလိုလို မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ လူတွေဝိုင်းကြည့် တိုင်းလဲ မျက်စိ နဲ့ ဘလက်ကာယာ အလုပ်ခံရသလို ခံစားရတယ်။ နောက်ပြီး အဝတ်အစား မော်ဒယ်တယောက်အနေနဲ့ ပြောရရင် ရင်သားကြီးတိုင်း အင်္ကျီဝတ်ရင် ကြည့်ကောင်းတယ် လို့ပြော မရပါဘူး။ ကျတော် ဆိုအမြဲလိုလို အမဲရောင် အင်္ကျီတွေ ဝတ်လေ့ရှိတယ်။ ဒီလို ဝတ်ခြင်းအားဖြင့် ရင်သားကြီးတာကို ကြီးတယ်လို့ မထင်ရအောင် ကာကွယ်နိုင်တယ်လေ။
လက်စသတ်တော့ ရင်သားကြီးတဲ့ ယောက်ျားတွေမှာလဲ ရင်သားကြီးတဲ့ မိန်းမတွေ နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ ပြဿနာရှိတာပါပဲလား။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ပြဿနာတွေ ကို ရင်သားသေးတဲ့ ယောက်ျား မိန်းမတွေကတော့ နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ နွေမှာ ပျော်တဲ့ အကောင်ပလောင်တွေက မိုးကို လက်မခံနိုင်သလိုပေါ့။
မိန်းမတွေ ရဲ့ ရင်သား က ယောက်ျားတွေ ကိုဆွဲဆောင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားတွေရဲ့ ရင်သားကတော့ မိန်းမတွေ ကိုဆွဲဆောင်တဲ့အပြင် ကိုယ်နဲ့ လိင်ချင်းတူတဲ့ ယောက်ျားတွေ ကိုလဲ ဆွဲဆောင်ပါတယ်။ သူတို့ရင်သားတွေကပဲ နှစ်ဆ တန်းခိုးကြီးတာလား ဒါမှမဟုတ် ….ကြီးလွန်းတာရဲ့ ဆိုက်အဖက်လား…?
“ကျတော့ ရင်သားကတော့ မိန်းမတွေအတွက် ပိုသင့်တော်တယ်လို့ ကျတော်ထင်ပါတယ်။ ကျယ်လွင့်တဲ့အတွက် မိန်းမတွေကို ကိုယ်ရောစိတ်ပါ အကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။ လုံခြုံတဲ့ ခံစားမှုကိုပေးနိုင်တယ်။ ယောက်ျားကောင်းတယောက်လို မိန်းမတွေကို အားကိုးချင်စိတ် ဖြစ် ပေါ်စေတယ်။ အင်း….ဒါပေမယ့် ကျတော့ ဂေး သူငယ်ချင်းအများစုကတော့ နည်းနည်း ပိုပိုသာသာကြီးတဲ့ ရင်သားရှိတာမျိုးကို ပိုသဘောကျကြ ကြိုက်ကြတယ်။ အဲ့လို ရင်သားမျိုး ကမှ လိင်ဆွဲဆောင်မှု ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။” လို့ အဲ့ဒီ မော်ဒယ်က ဆက်ပြော ပါသေးတယ်။
တကယ်ပါ မပြောရင် သိမှာမဟုတ်ဘူး။ တလျောက်လုံး ယောက်ျားတွေ ရဲ့ ရင်သား က မိန်းမတွေ ကို လုံခြုံမှု ပေးနိုင်တဲ့ ကုတင်တလုံးလို့ ထင်ထားခဲ့တာ။ မိန်းမတွေ ကို မှီနား ခွင့်ပေးနိုင်တယ်။ ဘဝ အမောတွေ ချွေးသိပ်ဖြေစေနိုင်တယ်။ အနားယူ အိပ်စက်နိုင်တယ်။ လိုအပ်တဲ့အခါမှာ နာနာကျင်ကျင်နဲ့လ ခိုဝင်ဲ ငိုကြွေးနိုင်သေးတယ်။ မတွေးမိတာက ယောက်ျား တွေရဲ့ ရင်သားဟာ ကုတင်သာသာ မကပါဘူး မိန်းမတွေအတွက် “အိမ်”ပါ။ ရင်ခွင်လို့တောင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသေးတာ။ တချို့လူတွေက အိမ်ကြီး ရခိုင်နဲ့နေချင်ကြတယ်။ တချို့ ကျတော့လဲ အိမ်တခုမှာ အဓိကအကျဆုံးက နွေးထွေးမှု လို့ဆိုကြပြန်တယ်။ တချို့ကကျတော့ အိမ်ဆိုတာ အဆင်ပြေဖို့ အရေးအကြီးဆုံးတဲ့ ပြန်ချင်တဲ့အချိန်ပြန်နိုင်တာပေါ့တဲ့။
ဒါကြောင့် အကျဉ်းချုပ်ရရင် ကြီးမာကျယ်ပြန့်တဲ့ ရင်သားဖြစ်ပစေ၊ သေးကွေးတဲ့ ရင်သား ကျဉ်းကျဉ်းလေးဖြစ်ပစေ၊ ကြွက်သားအပြည့်နဲ့ ရင်သားဖြစ်ပစေ၊ အမွှေးတွေနဲ့ ရင်သားဖြစ်ပစေ မိန်းမတယောက်အတွက်တော့ အိမ်ကောင်းကောင်းတလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်မှာ နေမယ့် အိမ် ပိုင်ရှင် မိန်းမတယောက်ကိုတွေ့ပြီဆိုပါမှ ယောက်ျားတွေ ရဲ့ ရင်သားဟာ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝလာတယ်။ အကျိုးရှိရှိ အသုံးကျလာတယ်။ တည်ရှိနေရတာ အဓိပ္ပါယ် ရှိလာ တယ်။ အဲ့လိုပဲ အမြဲ မတ်မတ်ရပ်နေဖို့လဲ ခွန်အားတွေရှိလာတယ်မဟုတ်လား…?
မှတ်ချက်။ ယောက်ျားတွေ ရဲ့ “ရင်သား” ကို “ရင်ဘတ်” လို့ခေါ်ပါတယ်။ “ရင်ခွင်” လို့လဲ တင်စား သုံးနှုန်းကြသေးတယ်။
Posted by တီချမ်း at 5:16 AM7comments: Links to this post